Hiran State - News: HS:-Jahwareerka siyaasadeed ee ka jira dalka oo lagu micneeyey labo arin
HS:-Jahwareerka siyaasadeed ee ka jira dalka oo lagu micneeyey labo arin
HS:-Midowka Yurub iyo wadamada Carabta oo taageeray howlgalka Ay Somaliya ka wado Kenya ka dib markii ay sheegeen in uu wax badan ka duwan yahay midkii ay dowlada Ethiopia ku gashay Somaliya dhawr samo ka hor.laakinse shacabka soamliyeed iyagu waxey dhibaatada ka jirta Somaliya farta ku fiiqayaan iney sabab u yahiin wadamada deriska iyo TFGda labadaba
Marka la eego howlgalada ay dowlada Kenya ka wado qeybo ka mid ah dhulka Somaliya siiba jubooyinka waxaa kuu soo baxeysa in Kenya ka go,an tahay iney wiiqdo kooxaha wadankeeda ka wada fowdada ee hoyga ka dhigta dalka Somaliya iyagoo ka faa'ideysanaya fowdadii uu wadanku ku soo jiray mudada.
Inta badan dowladaha carabta oo ay warbixino iska soo horjeeda siiyeen masuuliyiin ka tirsan TFGda ayaa ugu danbeyn waxbo kama jiraan ka dhigay qaar ka mid ah warbixinadaas waxeyn u muuqataa in dowlada Kenya ay kasbatay inta badan taageerada beesha caalamka iyadoo ay hada muuqato in wadanka yar ee qaniga ah ee UAE uu ka saacidayo dowlada Kenya dagaalka ay kula jirto kooxda Shabaab.
Sidoo kale dowlada Kenya ayaa xooga saartay in tuuladii laga saaro Shabaab aysan noqon mid lagu dhibaateeyo shacabka Jubooyinka iyo Gedo taasi bedelkeedana gar gaar lala gaaro bulshada ku dhaqan goobahaasi. shacabka ayaa u muuqda kuwo si taxadir leh u soo dhaweynayo ciidamada Somalida iyo Kenyanka ah ee wada jirka ula dagaalamayo kuwa Shabaab.
Dhanka kale wadamada yurub ayaa sidoo kale soo dhaweyay arintaan taasi oo meesha ka saareyso diidmadii ka imaaneysay shaqsiyaadkii Soomaalida ahaa ee mucaaradayey kuwo kale oo Somali ah oo ay la saxsaneyd soo gelitaanka ciidamadan. shacabka Jubooyinka ayaa hada ku jira marxalad ka duwan midii ay dhawrkii isbuuc ee hore ku jiri jireen maadaama aan goobaha laga saaro Shabaab lagu dhibaateyneyn amaba xoolahooda la dhaceyn sidii ku dhacday xiliyadii ay dalka soo galeen dhawr sano ka hor ciidamada dowlada Ethiopia.
Faraqa u dhaxeeya Kenya, Ethiopia iyo kuwa Amisom marka laga hadlayo soo gelitaanka gudaha Somaliya.
Kenya iyadu ma dooneyso in meelaha ay ka saarto Shabaab ay isku bedelaan goobo fowdo ah waxeyna si toos ah ula shaqeyneysaa amaba dooneysaa in jubooyinka ay ka dhashaan hal maamul qaabkii ay doonaanba haku keenaane.
Laakinse dowlada Ethiopia iyadu wax badan ayey siyaasad ahaan ka duwan tahay oo waxaad arkeysaa iyadoo ay dowlad TFG ah jirto ayey dhinaca kalena gobolada dhexe ku aruurinayaan Ahalusuna taasi micnaheedu waa ineysan aqoonsaneyn TFGda. waxaa kale oo iyaduna xusid mudan waxey isku dhax wadaa dhawr kooxood oo is barbar yaacayo oo midkasta marka ay qabtaan Tuulo dadka ula dhaqmayo sida ay markaasi jecel yahiin.
Ciidamada dowlada Ethiopia marka ay ku sugan yahiin gobolada dhexe marka aad u guur gasho uma muuqdaan ciidamo laga xakumo xarunta dhexe ee ciidamada dalka Ethiopia oo saraakiisha kusugan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyagaa go,aankii ay doonaan iska qaato.
Qaarkood shacabku waxey sheegayaan in ciidamada kaka sugan dowlada Ethiopia gobolada Hiiraan iyo Galgaduud la baray laaluush oo ay meelaha qarkood lacagta laga qaado baabuurta safarka ku ah jidka dheer ee isku xira Mogdisho iyo Waqooyi dhaqaalaha laga qaado waxey ku leeyahiin %.
Waa macquul in ay siyaasadahii ay wadanka ku soo galeen dhawr sano ka hor bedeleen laakinse iyaga wanaag kasta oo ay ku fikirayaan waxaa wax kama jiraan ka dhigayo kooxaha is barbaryaacaya ee midkasta leeyahay Ethiopia ayaa i watata oo hadane markey meel qabtaan ku dagaalama shacabka dushooda taasi oo meelahii horey looga saaray midowkii maxkamadaha ka dhigtay goobo colaadeed.marka aad joogto qeybo ka mid ah gobolada dhexe waxaad arkeysaa kooxo Somali ah oo ku faanayo in ay ciidamada Ethiopia siiyaan laaluush ka badan midka ay dowlada Ethiopia mushaar u siiso ciidankeeda bilkasta.Laakinse waxaa laga yaabaa in aysan arimahan ogeyn dowlada dhexe ee Ethiopia waayo ma jirto dowlad maanta dooneysa in ciidamadeedu bartaan laaluush hadii ay bartaane berito ayey afgambinayaan xukumada dalkooda arintanina horey ayey uga dhacday dowlado badan oo African ah.
Marka laga soo tago dowladaha Ethiopia iyo Kenya hadane waxaa caasimada Somaliya ee Mogdisho ku sugan mudo dhawr sano ah dhawr kun oo ciidamo African ah oo ka socda dowladaha Ugandha iyo Burundi ahyeeshe wax la taaban kro ma qaban mark alaga reebo iney dhawr KM oo ka mid ah Mogdisho ku qaadanayeen dhawr sano malaayin dolar halka ay kooxaha dagaalka ka wada Soamliya ay isticmaalayeen isla garoonak Mogdisho oo ay Amisom gacanta ku hayso amaba midka N50.
Mudadii Amisom ay joogeen Mogdisho waxaa ku geeriyooday kumanaan muwaadiniin Somaliyeed ah magaalada Mogdisho kuwaasi oo intooda badan loo dilayey waxad ku nooshahay meelaha ay Shabaab joogaan halka marka ay dhinaca Shabaab maamusho tagaane loo ciqaabayey iney la shqeeyaan ciidamo masiixiyiin ah sidaasina shacabka dan yarta ah ee noloshooda la xarbinayey ay kooxaha argagixisada ah ku gaaleyn jireen amaba ku dili jireen. hadiise ay Mogdishoka talin lahaayeen 1 koox shacabku kama walwaleen iney tagaan qeybo ka mid ah Mogdisho shacabkuna waxey sheehayan ciidmada Amisom kuwo dantooda u jooga Somaliya aysana dooneyn iney tilaabo horey u qadaan oo ay tagan Afgooye iyo Balcad oo Mogdisho u jirta min 30KM oo kaliya iskaba daa iney gobolada dalka qaarkood gaaraane.
Somalida oo ah hilib geed saaran oo ninkii u yimaadaba uu isagu ula imaanayo sharciyo u gaar ah iyagu hada kuwooda damiirka leh awood uma lahan iney ka hadlaan wax badan.
Mid ka mid ah saraakiishii hore ee Somaliya ayaa yiri hadaad aragtaan dowlad ay ciidamadeedu soo galaan wadan kale oo iska sameyneysa arimo ka baxsan siyaasada wadankasi ay soo gashay wax ka baxsan wadanka uma imaan iney dejiyaan. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri dowlad waa iney marka ay dal soo gasho tahay mid leh labo ujeedo.
1- Iney goobtii ay qabato noqon karto meel lagu nabad geliyo shacabka markaasi la qabsaday noloshooda iyo hantidooda amaba ay waxii farsamo ah kala shaqeyso hadba dowlada wadankaasi ka jirta.
2- Iyo in ay ciidamadaas soo galay ay hal nidaam ka hirgaliyaan goobahaas walibana xitaa hadii aysan dadku rabin qasab uga hirgeliya halkii ay dhawr kooxood oo kala ujeedo ah isku dhinac wadi laheyd.Waa arinta maanta ka jira gobolada dhexe ayuu yiri.
Inta badan shacabka Somaliyeed ayaa dhibaatada dalka ka jirto ku tilaamaya iney sabab u tahay in dowladaha deriska la ah Somaliya aysan dooneyn in Somaliya ka dhalato nidaam iyo kala danbeyn hadii ay taasi doonayaane mar hore la arki lahaa.halka ay dhinaca kale TFGda ku dhaliileen in aysan diyaar u aheyn iney xoojiso nidaamka dowlad goboleedyada oo hadii mar hore maamulada diyaarka u ah nidaam iyo kala danbeynta kala shaqeyn lahayeen uu ka yaraan lahaa culeysyada kaka furan caasimada Mogdisho lagana maarmi lahaa inba wadanka soo galaan ciidamo ka socda bariga Africa waayo deegan kasta iyaga ka shaqeyn lahaa sidii ay u sugi lahaayeen nabadgalyada deganadooda.
Laakinse Shariif iyo C/wali amaba xukumadii Farmaajo waxey doonayaan iney isku noqdan hogaankii sare iyo midkii dowlad goboleedyada iyagoo dhawr xaafadood ka jooga Mogdisho taasi oo loo aaneynayo xukumadaha kumeel gaarka ah ee sida sahlan markasta loo ridayo iney ugu wacan tahay siyaasada aan salka laheyn ee ay ku dhaqmaan hogaanka TFGda.
Arinta iyaduna indhaha laga qabsanayo oo qatarteeda leh kooxda Ahalu suna hadiiba aduunyadu aqoonsan tahay inba wax u muuqaal eg dowlad Somaliyeed ay dalka ka jirto maxaa loo hubeynayaa mey TFGda ayey horey ugu biireen oo ay qeyb siyaasadeed ka qateen maxey iyaga ula shaqeyn waayeen oo ay ugu ixtiraami wayeen iney tahay dowlad kumeel gaar ah halka ay idaacadaha siyaasado is diidan ka sheegtaan maalinkasta? jawaabta waa in mustaqblka marka Shabaab dalka laga saaro iyagana u kala jabi doonan labo garab oo qeyb iyaga ka mid ah iclaamin doonaan dagaal ka dhan ah cidkasta oo iayag ka soo horjeeda ileen dowlada Ethiopia hada Ahalu suna oo dhan xiriir lama lahan ee waxey garab iyo gaashaan u tahay kuwa gobolada dhexe iyadoo ay dowlad jirto oo ay waliba wadamada qaarkood caasimada Somaliya ee mogdisho u joogan safaarado.
Dhinaca kale bur burka siyaasadeed ee markasta ku dhaca dowladaha kumeel gaarka ah ee ka jiray dalka xiligii fowdada ayaa lagu micneeyaa iney sabab u tahay in aan marnaba xil leyska sarin inba dalka loo helo ciidamao Somaliyeed oo leh waxkasta oo ay u baahan yahiin sida qalabka militariga oo iyaga waxaa marka kasta niyada looga dilaa Taangiyo ay wataan ciidamao African ah iyagoo lagu qasbay iney ka dhinac dagalamaan Taangigaas iyagoo wata AK47 dadka iyo dalka la bur burinayo iyo shacabka dhamaanayona iyagaa leh.
Isku soo duuboo dalka Somaliya ma ahan mid u madax banaan siyaasadiisa iyo danahiisa dalnimo.
La soco wararkeena danbe maalmaha inagu soo aadan
· admin on November 23 2011 10:24:00 · 0 Comments · 1953 Reads ·
14,614,382 unique visits